राजपा अध्यक्षमण्डलमा विधानमाथि छलफलः महन्थ बन्लान् त दलको नेता ? – FeatureNepal
राजपा अध्यक्षमण्डलमा विधानमाथि छलफलः महन्थ बन्लान् त दलको नेता ?
काठमाडौ– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल संसदीय दलको नेताको विषयमा टुंगो लगाउन अध्यक्ष मण्डलको बैठक बसिरहेको छ । संसदीय दलको विधान पारित भएपछि मात्र नेता चयन गर्न सकिन्छ । सो विधानमाथि हिजो संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको थियो ।
संसदीय दलले छलफल गरि त्यसलाई अन्तिम रुप दिनका लागि अध्यक्षमण्डलको बैठकमा पठाएको छ । त्यही विधानमाथि अध्यक्षमण्डलमा छलफल भइरहेको छ । विधानको टुंगो लागेपछि यही साताभित्र दलको नेता टुंगो लाग्ने अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
विधान नहुँदा पार्टीको संसदीय दल प्रभावित भएको छ । संसदीय दलको नेता मात्रै होइन दलका लागि उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक पनि चुनिएका छैनन् । यो विधान आएपछि सबै कुरा एकैपटक टुंगो लाग्ने उनले बताए । विधानको मस्यौंदा तयार गर्ने जिम्मेवारी लक्ष्मणलाल कर्णले पाएका थिए । कर्णले सो विधान असार २१ गतेदेखि तीन दिनसम्म चलेको राजनीतिक समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
राजनीतिक समितिमा छलफल गरि संसदीय दलको बैठकमा पठाएको थियो । त्यहाँबाट छलफल गरि अध्यक्षमण्डलका पठाएको छ ।
महन्थ ठाकुर बन्लान् नेता ?
राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर सर्वसम्मतिले संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना बन्दै गएको जनाएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार नेताका लागि अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले पनि दावी गर्दै आएका थिए । सोही दावीका कारण नेता चयन गर्ने पाँच महिना समय लाग्यो ।
अहिले पछिल्लो समय महन्थ ठाकुरलाई नेता बनाउनुपर्ने भनि नेता महतो लचिलो भएका छन् । नेता महतोले ठाकुरलाई नेता छाडेपछि त्यसको बदलामा उपनेता तथा अध्यक्षमण्डलको दावी गरेका छन् । अध्यक्ष बनाउने कुरा महाधिवेशनबाट हुने कुरा भएकाले अहिलेनै त्यस विषयमा छलफल नगर्ने र उपनेताको विषयमा छलफल गरेर टुग्यांउने आश्वासन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
आज विधानको टुंगो लागेपछि संसदीय दलमा हुने विभिन्न पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया शुरु हुने पार्टीले जनाएको छ । नेता यादवले भने, ‘अध्यक्ष मण्डलका नेता को बन्ने विषयमा अहिले कुनै टुंगो लागेको छैन, विधानमा भएको प्रक्रियाअनुसार नेता चयन गरिनेछ ।’
Previous ट्रिपरको ठक्करबाट जडिबुटीमा १ जनाको मृत्यु
Next जब ठाकुर र महतो बीच भयो ‘भनाभन’ !